Isitudiyo sepvt esinesitayile esinendawo yokuhlala + ikhabhathi yeofisi - I-Airbnb
Isitudiyo sepvt esinesitayile esinendawo yokuhlala + ikhabhathi yeofisi
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguVineet
Indlu enkulu ye studio enefenitshala epheleleyo, enehombiso entle kunye nezinto ezintle. Indawo yethu ifanelekile kubantu abahamba ngeshishini, ukuphumla okanye ukuhamba kuba sibekwe ngokulula kumda weDelhi, phakathi koMzantsi-mpuma weDelhi kunye neFaridabad, kumgama wokuhamba wesikhululo esikufutshane saseDelhi kunye neemarike zasekhaya.
Zonke iindwendwe zamkelekile, ingakhathaliseki inkolo, uhlanga, uhlanga, uhlanga, okanye ulwimi.
Iza nekhabhathi yeofisi eyongeziweyo.
Indawo yethu yestudio iza nebhedi ephindwe kabini, iwardrobe, itafile ezisecaleni kwebhedi, itafile yekofu, iicouch ezimbini (enye yazo inkulu ngokwaneleyo ukuba umntu angalala kamnandi), TV yeLCD ene Uqhagamshelo lwe-DTH, itafile yebha, izitulo ezimbini zebhari, ifriji eneminyango emibini, kunye nekhitshi elifakwe isitofu segesi esinezitshisi ezine, itshimini, imicrowave, neepani zokupheka, izitya kunye nezitya.
Kukho i-dongle ekhoyo kwigumbi lokuhlala ukubonelela ngeenkonzo ze-intanethi ezingenazingcingo. Kwimeko apho iindwendwe zinqwenela ukuyisebenzisa, kuya kufuneka ziyitshaje ngokutsha ngesicwangciso sedatha esifanelekileyo ngokweemfuno zabo ngokwabo.
Ikhabhinethi yeofisi enefenitshala entle incanyathiselwe kwigumbi lokuhlala nayo, efumanekayo ukuba isetyenziswe ziindwendwe kulo lonke ixesha lokuhlala kwazo, ukuba zifuna indawo yokusebenza/yendibano.
Umlindi naye uya kufumaneka ukususela ngentsimbi ye-10 kusasa ukuya kweyesi-7 ngokuhlwa onokunyamekela ukucoca, ukupheka nokulanda izinto ezikufutshane, ukuba iinkonzo zakhe ziyafuneka (nceda umcebise ngesisa ngenkonzo yakhe).
Isakhiwo sethu singaphakathi kweSapna Market kwiCandelo-37, iFaridabad, esecaleni kweCandelo-37 HUDA Market. Uya kufumana iindawo zokutyela ezininzi, iindawo zomthambo, iisaluni, iivenkile ezithengisa ukutya, iibhari, iikhefi, iindawo zokubhaka, kunye neevenkile ezithengisa utywala ngaphakathi kumgama oziimitha ezingama-50 ukuya kuma-750 werediyasi yendlu.
Ngenxa yokuba kwindawo yorhwebo, indawo engqongileyo ikhuselekile kwaye ikhanyiswe kakuhle.
Umbuki zindwendwe ngu- Vineet
Indawo yokuhlala yomninimzi imalunga nekhilomitha ukusuka kwipropati, kwaye uya kufumaneka ngobuqu ukuze ancede iindwendwe, ukuba zifuna nantoni na.